Igumbi lesimanjemanje, elibanzi elinemibhede emi-2 elisendaweni yokuhlala.Ekhaya - I-Airbnb
Igumbi lesimanjemanje, elibanzi elinemibhede emi-2 elisendaweni yokuhlala.Ekhaya
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Ernest
U-Ernest Ungumbungazi ovelele
Ungalindela igumbi elibanzi elifakwe kahle elifakwe kabili elinokubukwa kwentaba, i-en suite yokugezela/indlu yangasese kanye nemibhede emibili yosayizi ongu-3/4. Ibhulakufesi elimnandi linikezwa ngokucelwa ngo-R85 p.P, Isidlo sakusihlwa ngo-arrangmt. I-villa inengadi enhle evundile enezihlahla zomdabu, utshani, izimbali nendawo eyanele yokuphumula. Kukhona ichibi lokubhukuda eli-oval elingu-6m elinamagumbi okuhlala elanga angu-2, igceke lokuhlala nokufunda, ichibi, isizinda sothando esineziko, itafula le-Bistro labangu-2, indawo yokupaka izimoto ngaphakathi kwendawo. Isevisi yokuwasha iyatholakala.
Igumbi 1 eline-en suite Bathroom: 23 square meter, amafasitela amakhulu angu-2 anokubukwa okuhle kwentaba, ikhabethe elinezicabha zesibuko, itafula/ideski ongasebenza kulo, izihlalo ezi-2, indawo yokubeka imithwalo, i-Geberit-Toilet, i-lavabo ephindwe kabili, ishawa enkulu evulekile eyindilinga, ithawula elishisiwe, ukufudumeza kwangaphansi izinsuku/ubusuku obupholile ebusika.
Igumbi lesibili lino-14 sqm umbhede osayizi we-Queen futhi litholakala kuphela ezinganeni zomndeni oqashisa igumbi lokuqala. Indlu yokugezela yesimanje yangasese engu-7,5 sqm iseduze nje. (Leli gumbi linesicelo esikhethekile futhi AKUFANELEKILE enanini lokubhukha legumbi lokuqala!)
Kukhona izinsiza zetiye nekhofi ekamelweni, Ukudla ngokucela. Ayikho ipikiniki evunyelwe ekamelweni, nokho kunetafula elikhulu endaweni yakho yokungena elinambalwa egcekeni elingaphakathi! Akukho ukuwasha okuvunyelwe ekamelweni kodwa isevisi yokuwasha iyatholakala.
Le ndawo isendaweni ethule uma ubuka izintaba futhi iseduze nolwandle oluhle olunesihlabathi, Indawo yokudlela yasebhishi, inxanxathela yezitolo yasemakhaya kanye neGolofu kanye nezindlela zokuhamba izintaba. Ukuhamba ngezinyawo ukuya echwebeni cishe Amaminithi angu-20, yingakho kulula ukusebenzisa imoto.
Ulwandle olunesihlabathi olude olungamakhilomitha angu-10 lulungele ukushiswa yilanga, ukuntweza noma ukubhukuda olwandle oluluhlaza okwesibhakabhaka ehlobo. Kukhona ukuqashwa kwesikebhe echibini.
Lapho sifika samukela izivakashi zethu nge-Apéro. Lokhu kubonakale kuyithuba elihle lokwazana nokuphendula noma yimiphi imibuzo, sisize izihambeli zethu kunoma yini ukwenza ukuhlala kwazo kujabulise ngangokunokwenzeka. Ekulungiseleleni kwangaphambili, sinikeza izitsha ezimbalwa ezincane i-la carte. Ibhulakufesi lesiNgisi elinenhliziyo enhle lifakiwe esilinganisweni segumbi. Uyamenywa ukuba uphumule engadini yethu evundile/enhle kanye neChibi eliluhlaza okwesibhakabhaka, noma uhlale e-Boma eduze komlilo ovuthayo!
Lapho sifika samukela izivakashi zethu nge-Apéro. Lokhu kubonakale kuyithuba elihle lokwazana nokuphendula noma yimiphi imibuzo, sisize izihambeli zethu kunoma yini ukwenza ukuhlal…
UErnest Ungumbungazi ovelele